Ukwabelana njani ngeefolda kunye namaxwebhu kwiNethiwekhi yeWindows 8
Ngu-Mark L. Chambers
Ukwabelana into ethile kwinethiwekhi ivumela ezinye iikhompyuter ukuba ziyibone xa ukhangela. IWindows 8 ithatha indlela ekhuselekileyo negcinakeleyo ngokungagqibekanga: Akukho nto kwabelwana ngayo kwinethiwekhi kude kumiselwe ngokukodwa. Nangona kunjalo, ungabelana ngefolda kunye nayo yonke imixholo ngokulandela la manyathelo:
Cofa i icon yeFayile Explorer kwibar yomsebenzi yeDesktop ukuvula iWindows Explorer; emva koko uye kwindawo yolawulo.
Cofa iqhosha kwifolda uze ukhethe Yabelana Nayo kwimenyu ebonakalayo.
Ukwabelana ngefolda-ukuvumela ukufikelela okupheleleyo kokufunda / ukubhala kunye neqela lakho lasekhaya-khetha iqela lasekhaya (Jonga kwaye uhlele) ukungena.
Unokukhetha ukungena kwiQela laseKhaya (Jonga) kwimenyu ukuba ufuna ukuvumela abanye kwiqela lakho lasekhaya ukuba bavule kwaye bafunde iifayile, kodwa bangenzi lutshintsho kubo.
Ukwabelana ngefolda kunye nabasebenzisi abathile (endaweni yomntu wonke kwiqela lakho lasekhaya), khetha ukungena kwabantu abathile.
Chwetheza igama lomsebenzisi ukukhetha umsebenzisi ngamnye omnika amalungelo okwabelana. Unganqakraza kwiNqanaba leMvume pop-up imenyu ukuseta ukufundwa okanye ukufunda / ukubhala ukufikelela kwifolda kunye nemixholo yayo. Emva koko cofa iqhosha le-Share ukuze ubuyele kwiWindows Explorer.
IWindows 8 ibonelela ngonxibelelwano olululo ngokuthumela i-imeyile kwindawo ekuyo iifayile kunye neefolda ekwabelwana ngazo, okanye ungakhetha ukukopa amakhonkco kwiBhodi eqhotyoshwayo ngokuncamathisela kamva kuxwebhu (njengombhalo weLizwi).
Unokwabelana ngedrive ngendlela efanayo, kodwa uMicrosoft uyalumkisa ngokuchasene nayo. Kuya kufuneka unike ifolda enye kuphela ekwabelwana ngayo kwidrive nganye kwikhompyuter yakho yenethiwekhi.
Xa wabelana ngefolda, ubeka yonke into kwifolda kwinethiwekhi. Ke ngoko, ukuba kukho nokuba inye into (nokuba luxwebhu okanye ifolda encinci) ongafuniyo ukuyisasaza nabanye ngaphakathi kwifolda, ungabelani ngefolda!
Emva kokuba ifolda inikwe amandla ngokufunda / ukubhala ukufikelela, imixholo yayo inokuvulwa, igcinwe, ihanjiswe, okanye ikhutshelwe, kubandakanya ngaphakathi kweFayile evulekileyo, Gcina, kunye nokuKhangela kwiibhokisi zencoko yababini, eziqhelekileyo kwiWindows 8 nakwizicelo zakho.
I-chlorhexidine gluconate ye-0.12 yokuhlamba umlomo
resi ketochlor ushiye into yokuthambisa
Ungayitshintsha njani ingxowa yecatheter
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-steroid emadodeni
Ithe tyaba phezulu nasezantsi
usulelo lolusu ngamadyungudyungu